Dooda Kenya 'rajo maleh' | KEYDMEDIA ONLINE
Dooda Kenya ‘rajo maleh’
Maxkamadda ugu sarreysa Qaramada Midoobay ee ICJ ayaa galabta dhageysatay dacwada Soomaaliya ee ka dhanka ah Kenya, taas oo la xariirta badda Soomaaliya ee Kenya galisay muranka.
THE HAGUE, Netherlands – Maxakamadda Cadaaladda Adduunka ayaa dhageysatay dacwada JFS oo ay gudbinyeen guddi gar-yaqaanno ah oo uu hoggaaminyay Sii-hayaha xilka Ra’iisul Wassare ku xigeynka Soomaaliya Mahdi Guuleed.
Kenya ayaa goor sii horeysay shaacisay in aysan soo xaadiri doonin dhageysiga dacwada ee todobaadkan kadib markii Maxkamadda fadhigeedu yahay Hague ay diiday in markii afaraad dib loo dhigo kiiska.
ICJ, waxa ay sheegtay in ay ka xun tahay baaqashada Kenya, waxayse caddeysay in ay heshay dukumintiyo ku filan."Maxkamaddu waxay ka xuntahay go'aanka Kenya ee ah inaysan ka qaybgalin dacwadaha afka ah," ayuu yiri madaxweynaha ICJ Joan Donoghue.
Soomaaliya waxa ay dhaleeceysay caasinimada Kenya ee Maxakamadda ICJ, "Waxaan si qoto dheer uga xunnahay in Kenya ay go'aansatay inaysan ka soo muuqan dhegeysigaan," ayuu yiri, Mahdi Maxamed Guuleed, oo furay dacwada Soomaaliya.
Mahdi Guuleed, wuxuu sifo aan sharciga waafaqsaneyn ku tilmaamay baaqashada Kenya, wuxuuna sheegay in aysan jirin sabab ay ku caban karto, maadaama ay ICJ hore uga ogolaatay in Saddex jeer dib loo dhig kiiska, taas oo sababtay inuu 18 bilood dhib u dhaco.
Mahdi Guuleed, wuxuu aad ugu celceliyay in diidmada Kenya aysan ka hor istaagi kartin maxkamadda inay gudato waajibaadkeeda. Guud ahaan qareennada u doodayay Soomaaliya waxa ay sheegeen in dacwada Keenya ay salka ku heyso boob iyo dhul balaarsi aan sharci ahayn.
Qareenada Soomaaliya waxa ay caddeeyeen in uusan jirin heshiis cad oo ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo ku saabsan muranka badda, waxayna Kenya ku eedeeyeen hadallo iska hor imaanaya oo aan sal iyo raad lahayn.
Qareenada oo muujinayay rajo xumada Kenya ayaa sheegay in ay damacday in ay ka faa’iideysato awoodda yar ee Soomaaliya, taasina aysan hadda suuragal hayn.
Prof. Philippe Sands, oo kamid ah qareennada u doodaya Soomaaliya, ayaa sheegay in Kenya ay warbixinno is-khilaafsan kasoo saartay xuduudka badda. Prof. Philippe ayaa Maxkamadda hordhigay khariidad ay Kenya sameysay taaso cadeyneysa xuduudka saxda ah asigoo sheegaya in dooda Kenya aysan 'rajo laheyn'.
UPDATE: The lawyers representing #Somalia at ICJ, presents the court multiple maps disproving #Kenya's claim. A map published by Kenya's own National oil company shows the original boundary line claimed by Somalia. Prof. Philippe Sands also highlights Kenya's conflicting claims. pic.twitter.com/F9pAwr7UZb
— KEYDMEDIA English (@Keydmedia) March 15, 2021
Dacwadda ka socota ICJ, oo sidoo kale loo yaqaanno Maxkamadda Adduunka, ayaa la doonayaa inay ka garnaqdo dacwada badda Soomaaliya ee Kenya muranka galisay.
Sedex-xagalka biyaha ayaa ku fidsan dhul ka badan 100,000 oo kiiloomitir oo laba jibbaaran (40,000 square miles), waana aag weyn oo Badweynta Hindiya ah hodanna ku ah kalluunka isla markaana laga yaabo inay ku jiraan keyd saliid ceyriin ah.
Birri ayaa mar kale loo ballan sanyahay Maxamadda, waxaana, mar labaad la dhageysan doonaa u doodayaasha Soomaaliya.
Bogga Wararka ee Keydmedia Online kala soco dhageysiga Maxkamadda oo Live ah. Sidoo kale, bogga Twitter ee Keydmedia English ayaa kala socon kartaa wixii macluumaad ah oo Qareenada Soomaaliya usoo gudbin doonaan Maxkamadda.
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo hanjabaad u diray RW Rooble